Saraawiisha qaboojiyaha clothing Dharka bakhaarka qabow • Qalabka kombiyuutarka ee P&M
Saraawiisha qaboojiyaha ee shaqooyinka gaarka ah
Dharka qaboojiyaha iyo dharka qabow pm.com.pl waa xulasho ballaaran oo dhar ah oo ku habboon xaaladaha adag. Nooc la xaqiijiyay oo laga sameeyay waxyaabaha ugu fiican ayaa ka dhigaya ka shaqeynta heerkulka hoose mid aamin ah oo raaxo leh maalin kasta. Surwaal qaboojiyaha waa mid ka mid ah cunsurrada dharka takhasuska leh ee loogu shaqeeyo xaaladaha adag ee shaqada.
Midigta jaakadaha iyo kabaha dukaanka qabow waa qaybta ugu muhiimsan ee qalabka shaqaalaha. Boggayaga dukaanka, dharka bakhaarka qabow ayaa si taxaddar leh loogu qoondeeyey si dhakhso ah oo fudud u raadinta.
Dungareesyada dahaaran si looga hortago qabowga illaa -45 ° C
Qaboojiyeyaasha barafoobay waxaa lagu heli karaa cabirro u dhexeeya S illaa 3XL, moodooyinkoodana guud waxay ku habboon yihiin dumarka iyo ragga labadaba. Dungarees waa dharka la doorto ee lagu diiriyo jir badan iyadoo loo oggolaanayo xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Soo-saaraha wuxuu bixiyay noocyo kala duwan oo midab ah (tusaale, buluug buluug ah, cagaar, buluug) iyo moodello leh qaabab yaryar oo qaabab midabyo kala duwan leh leh. Qiimaha tartanku waa xalka saxda ah ee dadka raadinaya xalalka dhaqaale, iyo marka aad iibsaneyso tiro aad u badan, waxaa suurtagal ah in la siiyo qiimo dhimis dheeraad ah.
Hi-Glo 25 Saraawiisha Coldstore, ilaalin ilaa -64 ° C
Surwaalka keydka qabow - doorasho aamin ah
Saraawiisha qolalka qabow iyo qaboojiyaha oo ka samaysan waxyaabo si habboon loo xushay sida suufka ama polyesterka, si looga ilaaliyo qabowga xitaa ilaa -64 darajo C. Moodooyinka la bixiyay waxay leeyihiin badhanno raaxo leh, jeebado, iyo ganaaxyaal la isku hagaajin karo oo raaxo weyn leh. Saraawiisha waxay haystaan ​​shahaadooyin iswaafaqsan oo xaqiijinaya la qabsiga ay ku shaqeeyaan heerkulka hooseeya.
Intaa waxaa dheer, haddii aad rabto inaad shaqsiyeeysid dharkaaga, waxaad si fudud uga dalban kartaa nooc ka mid ah daabacaadda kombiyuutarka lub daabacaadda shaashadda leh sawir gacmeed adiga kuu gaar ah, magaca shirkadda, magacaaga ama booskaaga. Waa xalka ugu fiican kuwa doonaya inay abuuraan sawir isku mid ah shirkadda.
Waxaan leenahay baarkinka mashiinka u gaarka ahTani waxay noo oggolaaneysaa inaan xakameyno calaamadeynta marxalad kasta oo mashruuca ah isla markaana aan isla markiiba falcelinno haddii ay dhacdo wax ka beddel kasta. Kooxdayada khibrada leh ayaa ka caawin doonta xulashada alaabada waxayna bixin doonaan qiimeyn calaamadeyn oo bilaash ah.